အသက် ၅၂ နှစ် - Porn သွေးဆောင် ED၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းသည် ၃၅ နှစ်အကြာတွင် Your Brain On Porn ဖြစ်သည်
အသက် ၅၂ နှစ် - Porn သွေးဆောင် ED၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းသည် ၃၅ နှစ်အကြာတွင်မရှိ
မီ: ငါအလုပ်မဖြစ်ဆက်ဆံရေး၏3ဆယ်စုနှစ်ဘို့, ငါ၏အသက်တာ၌မကောင်းဘူးလို့လိင် (ငါ့ကိုအများအားဖြင့်အကြောင်းမရှိ) ED, porn စွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးအလေးပေး / သေလွန်သောသူတို့သည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားဤမျှလောက်ခံစားခဲ့ကြရသည်။ စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်မကြာခဏစိုးရိမ်ထိတ်လန်နှင့်အမျက်ဒေါသနှင့်အပြစ်တင်စာရေးကြောင်းအားလုံးနှင့်အတူရောနှော။ အကြှနျုပျလမျးခရီး Self-အကူအညီနဲ့စာအုပ်တွေ, ကွဲပြားခြားနားသောကုသနဲ့ကျွန်မတကယ်အလွန်အသုံးဝင်ကိုရှာဖွေပိုမကြာသေးမီကလုပ် SA နှင့်အတူနှက်နေသည်။
NOW ကဤအရာအားလုံး၏ ၉၀% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောရုပ်သိမ်းမှုများကိုငါပြီးခဲ့သည့် ၃ နှစ်ကငါရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ငါပုံကိုပိုမိုပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာအတွက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှည်လျားသောစွပ်စွဲဖော်ပြချက် ၃ ခုကိုငါထောက်ပြမည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၅၂ နှစ်ကကဲ့သို့သန့်ရှင်း။ အံ့သြဖွယ်ခံစားခဲ့ရပြီးကျွန်ုပ်၏ PIED သည် ၉၀% ပိုကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေးသည် ပို၍ ကောင်းမွန်ပြီးကျွန်ုပ်၏အလုပ်တွင်ကျွန်ုပ်၏အာရုံသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ဘဝနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုခံစားရသည်။
ငါပစ္စည်းပစ္စယများလွှတ်ပေးရန်သင်ယူခဲ့တယ်။ ဒါဟာဖြစ်ရုံသွားဖြစ်ခြင်းနှင့်သွားဖြစ်ခြင်းခွင့်အကြောင်းပါပဲ။ တဖန်သင်တို့ပြည့်ဝ၏သဘောပေါက်။ ပြီးပြီ အခြားအရာများ (ပိုက်ဆံ၊ အဆင့်အတန်း၊ ချီးမွမ်းခြင်း၊ လိင်၊ အစားအစာ၊ အမျိုးသမီးများ) သည်ကျွန်ုပ်တို့မထိန်းချုပ်နိုင်သောအပိုဆုများဖြစ်သည်။ ကျွန်မဆိုလိုတာကမိန်းမတွေ၊ လိင်တွေတောင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှငါတို့ကိုလူကြီးမင်းကိုမပြောခဲ့ဘူးဆိုတာသူတို့ပြောခဲ့ကြလား။ ဒီမှာငါတို့ဤဖိုရမ်များအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။
ရိုးရိုးလေးပါ၊ မရတာ…ဖြစ်ခြင်းသာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်…ဒါပေမယ့်ရိုးရှင်းမှုဟာမိုက်မဲခြင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရှင်းခြင်းသည်လန်းဆန်းစေပြီးအမှန်တရားနှင့်ပိုမိုနီးကပ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သဘောထားသစ်သည်ပူဆွေးသောကရောက်နေသော oxegen မျက်နှာဖုံးနှင့်ပရမ်းပတာဖြစ်ခြင်းနှင့်ယခင်ကခံစားခဲ့ရသောဆင်းရဲဝေဒနာများကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်တူသည်။ ဘ ၀ ဆိုတာတကယ်တော့လွှတ်ခြင်းအကြောင်းပါ။ သင်လုပ်လေလေ၊ သင်များများရောက်လေလေ၊ သင်၏ပန်းကန်ပေါ်၌ကောင်းချီးများများများလေလေဖြစ်သည်။ ထိုအခါသင်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပေးဆပ်ခြင်းနှင့်ချစ်ခြင်းကိုခံစားရသည်။
သငျသညျအစဉျအမွဲရုံဖြစ်ခြင်းကြိုးစားခဲ့ဖူးသလား ဇုန်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အနားယူခြင်းကိုကျွန်ုပ်မဆိုလိုပါ။ ဆိုလိုတာကမင်းရဲ့အတွေးတွေ၊ ခံစားချက်တွေ၊ စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ သမိုင်းတွေ၊ ပုံစံတွေ၊ fetishes၊ စွဲလမ်းစေတဲ့တွန်းအားတွေ၊ အမျက်ဒေါသတွေထွက်လာတာ၊ သူတို့နဲ့အတူထိုင်ပြီးတုန့်ပြန်တာမျိုး၊ ထိုအပြည့်ဝခံစား - ပိုပြီးအစိုင်အခဲသော်လည်းကျယ်ဝန်း။ အဲဒါဟာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒါပေမယ့်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာစွဲလမ်းနေတဲ့ပြင်းထန်တဲ့စွဲလမ်းမှုမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကငါသွားခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ဆိုလိုတာပါ။
သင်သည်ငြင်းပယ်မှုမှတဆင့်ချိတ်ဆက်နေမည့်အစားလက်ခံမှုကိုဖြတ်သန်းပါ။ သွားမရွေးရွေးချယ်မှုမရှိဘဲစွဲနေစေမည့်အစားရွေးချယ်ပါစေ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့အသိပညာကိုဖြတ်သန်းပြီးအဲဒါကိုတိုက်လှန်နေမလား။ သို့မဟုတ်ပါက၎င်းကိုအားဖြည့်ပေးသည့်သင်၏စွဲလမ်းမှုကိုဖမ်းဆုပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ MINDFULNESS ကကျွန်တော့်ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့တယ်။ ဒါကအရာရာတိုင်းကိုသိမြင်နားလည်မှုကိုသယ်ဆောင်လာတာနဲ့အမျှ ... ငါတို့ရင်ဆိုင်ရမှာပါ ... ပြီးတော့ ... သွားကြစို့ !! အဲဒါတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးလား။
ကျွန်ုပ်တို့လူသားများနှင့်အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံသဘာဝသဘာဝအကြပ်အတည်းကိုမသိသောအခါစွဲလမ်းသောသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုမရှိသူကိုကျိန်ဆဲသည်။ ဒီအခြေခံပြောင်းလဲမှုကိုငါတို့လက်ခံဖို့လိုတယ်။ မတိုက်ခိုက်ပါနဲ့
အဆိုပါအကျပ်အတည်းကိုဤ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်း (“ အကယ်၍သာ”) နှင့်မရေမတွက်နိုင်သောအလားအလာများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထိတ်လန့်စေမည်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း (ဤ“ ဖြစ်သင့် / ဖြစ်နိုင်သည်…နှင့်မရေမတွက်နိုင်အောင်များစွာသောသွေးဆောင်မှုများကို) ရွေးချယ်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဒုက္ခရောက်သည်။ မင်းမြင်လား ဗုဒ္ဓ၊ ယေရှုနှင့်ကျွန်ုပ်၏အခြားသူများသည်ကျွန်ုပ်ထက် ပို၍ ပညာရှိကြောင်းထောက်ပြခဲ့သည်။ ကျနော်တို့တတိယလမ်းရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ (ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်၏အခြားပို့စ်များရှိပုံရသည်
အံ့သြစရာကကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အားပြည့်စုံစေမည့်သို့မဟုတ်လွတ်မြောက်စေမည့်အရာတစ်ခုကိုပေးမည်ဟူသောကတိတော်များကိုဖြစ်စေသည်။ သူတို့ဟာငါတို့အတွက်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖို့စိတ်ကိုကြိုးစားကြတယ်။ ဒါကြောင့်အဲဒီမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကလမ်းလွဲနေတယ်။ လမ်းကြောင်းမရှိပါဘူး။ သူတို့ကိုကလေးငယ်တစ် ဦး ကတီထွင်ခဲ့သည်။ ဆူညံနေသောလိင်ဆက်ဆံနေသောကမ္ဘာကြီးတွင်သူတို့ကိုအထီးကျန်စေခဲ့သည်။ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ၊ စိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊ တောင့်တခြင်း၊ ငြူစူခြင်း၊ တပ်မက်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ရိပ်မိခြင်း၊ ဟော်မုန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းရှိအင်ပါယာကြီးတစ်ခုသို့ကြီးထွားလာသည်။
မင်းတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံကိုမင်းမမှားခဲ့ဘူး၊ ငါတို့အားလုံးလိုပဲသတိမထားမိခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမရိုက်ပါနဲ့။ ဒါကတူညီတဲ့ shit ့ပိုပါတယ်။
ယခုမူကား, သင်သည်ဤ site ပေါ်တွင်ခံစားနေရပြီးကတည်းကငါတို့သတိပြုမိသော်လည်းနာကျင်မှု, အထီးကျန်, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတ်ကျရောဂါ, စွဲသို့မဟုတ်အထက်ပါအားလုံး (ငါ့ကိုကဲ့သို့!) - ဒါဟာနိုးထဖို့အခွင့်အလမ်းပါပဲ။ သင့်အတွင်းရှိလွတ်လပ်မှုကိုနိုးထပါ။
အဲဒီမှာလာလွတ်လပ်မှုကိုအမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်ဖြစ်ကြပြီးအသက်တာ၌သွားရပေမယ့်မှသာမှန်ကန် core ကိုလွတ်လပ်ခွင့်လည်းမရှိ - ရှိနေခြင်းအပေါ်သွားအဘယျသို့ပေမယ့်နှင့်ရှေ့မှောက်တွင်ယခု -right ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်စေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးသိရသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခများသည်အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မရည်ရွယ်ဘဲစွဲမှတ်ထားသောယုံကြည်မှုများမှလာသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမှားမဟုတ်ပါ။ သို့သော်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သတိထားမိလာသောအခါ၎င်းကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းပြချက်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ရှိကြောင်းမခံစားရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်နေရာဖြစ်သည်ကိုလက်ခံရန်လိုအပ်ပြီး၎င်းသည်မှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုမေးမြန်းရန်လိုအပ်ပြီး၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့မသိသောအမှန်တရားတွင်တိတ်တဆိတ်ကြီးထွားလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောက်ရွံ့ Fantasy "အမေရိကန်" မဟုတျပါ - အတွေ့အကြုံရှိ
ငါတို့မူကား၊ ငါတို့ကြောက်စိတ်တွေ၊ ရွှံ့နွံတွေထဲလျှောက်လျှောက်နေသလိုငါတို့ဘ ၀ ကိုနင်းမိတယ်။ ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်ခက်ခဲပုံရသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤယုံကြည်မှုများသည်“ ငါတို့” နှင့်တူသည်ဟုခံစားရသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ယုံကြည်တယ်။
စိတ်က“ မင်းဟာမင်းနဲ့တူတယ်၊ မင်းဟာပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်မဖြစ်နိုင်ဘူး” ဒါမှမဟုတ်“ သင်ဟာဒီလိုမဟုတ်ပေမယ့်ကမ္ဘာကြီးဟာကမ္ဘာကြီးကိုမပြောင်းလဲနိုင်ဘူး” ဒါမှမဟုတ်“ ငါ / porn / fantasy ဖို့လိုတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါ၊ တစ်ခုလုံးလုံခြုံပါ…ငါ့ကို! ပြီးတော့ငါကအဲဒါကိုမရတော့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်“ ငါကမလုံလောက်ဘူး၊ ငါဟာတန်ဖိုးမရှိသူလို့ခံစားရတယ်။ဤဖော်ပြချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အစဉ်မပြတ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနှင့်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း၏ကိရိယာများဖြစ်သည်။
ဤအရာတစ်ခုစီသည်အလွန်တကယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည့်အဆုံးမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်စွဲလမ်းမှုလမ်းကြောင်းဆီသို့ ဦး တည်စေသည်။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲကြိုးမဲ့အဆုံးသတ် ပိုဆိုးတာကငါတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုထောက်ခံဖို့အထောက်အကူတွေအများကြီးတွေ့နိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမျက်ဒေါသနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုတရားမျှတစေပါ။ ဟုတ်လား သို့သော်ထိုအရာများအားလုံး (ကျွန်ုပ်တို့၏မှန်ကန်သောယုံကြည်မှုများနှင့်အမြင်များ) ရှိခဲ့လျှင်၎င်းသည်ဤချည်မျှင်၏အဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့သော်သင်မူကားသင်၏အနေအထားကိုအကာအကွယ်ပေးပြီး၊ အချိန်တိုင်းတွင်တင်းကျပ်သောအငြင်းပွားမှုများကိုပေါ်ပေါက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တရားသို့မဟုတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထောက်ပြခြင်းမရှိလျှင်… အကယ်၍ အငြင်းပွားမှုတိုင်းကိုအနိုင်ရသော်လည်းနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းစွာနက်ရှိုင်းခြင်းမရှိသည်ကိုသင်မပြတ်မလပ်သိရလိမ့်မည် ။ သင်၏စွဲလမ်းမှု / စွဲလမ်းမှုအပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်အမှန်တရားနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှု (သို့) စိတ်ကျဝေဒနာမရှိသောကြောင့်ယုံကြည်မှုကိုမေးခွန်းထုတ်ရန်သင့်အားလက်ဆောင်ပေးသည်။
လက်ခံမှုသည် ၀ ိညာဉ်ရေးရာမဟုတ်ပါ၊
လက်ခံမှုသည်တမင်ရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်နာရီတိုင်းလေ့ကျင့်သောအခါစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောဘဝပုံစံဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်ဘ ၀ တွင်ကျွန်ုပ်အားစိတ်အားတက်ကြွစေပြီးလူသားဖြစ်ခြင်း၏ကန့်သတ်ချက်များကိုတွန်းအားပေးခဲ့သောကျွန်ုပ်၏ဘ ၀ တွင်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးစံနမူနာရှင်များမှာဆင်းရဲဒုက္ခကိုလက်ခံပြီးရှင်သန်ရုံသာမကရှင်သန်နိုင်သည့်သူများဖြစ်သည်။
စဉ်းစားကြည့်ပါ။ shitty အခြေအနေများကိုအပြည့်အ ၀ လက်ခံသောလူများသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါလော။ ရှေ့ဆက်သွားနှင့်သင်၏လက်ခံပါ။ ရှုထောင့်အားလုံး။ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေနဲ့ငါတို့ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူတို့ (သူတို့တတ်နိုင်ပေမယ့်) ပျောက်ကွယ်သွားမှာသေချာပေမယ့်သူတို့မလိုအပ်ဘူး။ လေထုညစ်ညမ်းမှု၏အဖြေသည် dilution ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျလာပြီး၎င်းတို့ကိုမလိုအပ်ဘဲရှိနေခြင်း၏အမှန်တရားတွင်ပင်ပျက်ပြားသွားသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုလုံခြုံမှုသို့မဟုတ်လွတ်လပ်ခွင့်သို့မဟုတ်ပြီးပြည့်စုံအောင်ပေးမယ်လို့သူတို့ရဲ့မှားယွင်းတဲ့ကတိထဲမှာမလိုအပ်ဘဲ။ တစ် ဦး စွဲ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ကငြင်းပယ်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏တွဲဆက်မှုသည်မလိုအပ်သောအရာဖြစ်လာသည်။
လှတျလပျမှုကိုဆိုလိုတာ OBLITERATING သွေးဆောင်မှုသနည်း? OR အိုင်တီနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်
သခင်ယေရှုသည်တောကန္တာရတွင်ရှိစဉ်စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကိုခံရသောအခါသူသည်သွေးဆောင်မှုကိုလုံးဝမဖယ်ရှားနိုင်ဘဲ“ ငါ့ကိုငါ့နောက်သို့ဆုတ်လော့” ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ၎င်းကိုသူမြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်အနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်သူသည်ဆက်မချိတ်နိုင်တော့ပါ။ ရက်ပေါင်း ၄၀ လား ငါတို့ပြောနေတာယေရှုပဲ၊ ငါတို့နည်းနည်းကြာကြာငါသေချာတာပေါ့။
ယေရှုသည်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မှုကိုအသိအမှတ်ပြုပြီး၎င်းကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်“ အရာဝတ္ထုတစ်ခု” သို့ဖြစ်စေ၊ အရိပ်တစ်ခုသို့ဖြစ်စေနိမ့်ကျခြင်းအားဖြင့်၎င်းနှင့်အတူတွဲဖက်တည်ရှိခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါမပျောက်ပါဘူး။ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်း၏ထင်ယောင်ထင်မှားသည်ကြာရှည်စွာတိတ်ဆိတ်သွားနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သော sparring၊ လူသားများအတွက်လိုအပ်သောသတ္တုပါးတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ခြင်းသည်၎င်းင်းတို့ကိုအံ့ things စရာကောင်းသောအရာများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိပြီးလက်ခံမှသာလျှင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၇ ဘီလီယံမျှသောအရာများကိုကြိတ်ဆုံသော“ ဘုရားသခင်ကြိတ်စက်” များဖြစ်သည်။ လက်ခံပြီးနိုးပါ။ ငါတို့အသုံးချနိုင်တယ်
ကျွန်ုပ်တို့ကိုထိတ်လန့်စေပြီးအလိုရှိသည့်အရာများကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်ရာနေရာတွင်ထားပါ။ ငါတို့နောက်သို့ မင်းတို့တည်ရှိနေပေမဲ့သူတို့ကိုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျစေပါ။ သင်ဟာစိတ်ဓာတ်ကနေသင်အမှန်တကယ်တည်ရှိမယ်ဆိုရင်သင်ဟာဒီထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ပူးတွဲတည်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိစေပါ။ ဝိညာဉ်တော် ဦး ဆောင်ဖြစ်လာသည်။ နာကျင်မှုဟာပြbecomingနာတစ်ခုကနေကိရိယာတစ်ခုဆီသို့ပြောင်းလဲခြင်း၊ သငျသညျဤအလုပ်ကိုလုပ်နေသို့ goaded လျက်ရှိသည်သောအမှန်တရား၏ tool ကို - ဒီတွေ့ရှိနေရသည်။
သင်ပြုသည့်အခါနာကျင်မှုယခု ... လက်နက်မှတ်တိုင်များတစ် function- သကဲ့သို့သင်တို့အခြားလမ်းကိုသွားဖို့လိုအပ်မယ့်လက်နက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်။ သင်တန်းသငျ့စိတျမှီတိုငျအောငျ ... ဤအရပျမှသငျသညျကိုဆောင်ခဲ့သောတူညီဒဏ်ဍာရီသူကိုယ်တိုင်ထည့နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ခုခံတွန်းလှန်ဖို့အစပြု ... သို့သော်စိတ်ကိုကနေပဲပိုပြီးဆူညံသံဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ကို (လူအပေါင်းတို့သည်ဝါယာကြိုးများနှင့်တုန့်ပြန်, သမိုင်း, အသင်းအဖွဲ့များ, ယုံကြည်ချက်စသည်တို့) ရှိနေခြင်းသို့မဟုတ်အမှန်တရားမဟုတ်ပါဘူး။ အသိအမြင်ကိုသင်တစ်ခုခုဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဆူညံစိတ်ထဲကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော။
မည်သူသည် ORDERS မှယူသနည်း။ အတုလား၊
ထို့ကြောင့်လွတ်လပ်မှုသည်စိတ်တွင်မရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲရှိကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မားသောနေရာမှ - ကျွန်ုပ်တို့၏နက်ရှိုင်းသောအပိုင်းများမှလွတ်လပ်ခွင့်မှရယူသင့်သည်။ အပြန်အလှန်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများနှင့်စွဲလမ်းသူများသည်နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်။ ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါငါတို့ဟာ“ မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်တွဲဖက်ဖန်တီးခြင်း” များမဟုတ်ကြဘူး။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောက်စိတ်များ၊ သမိုင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုများသည်အလွန်တကယ့်ကိုနာကျင်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ပိုဆိုးသည်မှာ၎င်းသည်မှန်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နာကျင်မှု၊ စိတ်ဆန္ဒများကိုတိတ်တဆိတ်သူနာပြုဆရာမနှင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းဖြင့်မကြာခဏကျွန်ုပ်တို့၏မသိဘဲမသိဘဲတိတ်တဆိတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်သည်။ ထို့နောက်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အားတုံ့ပြန်၊ ၎င်းတို့အပေါ်ပြုမူပြီးအခြားသူများကအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်ကြသည်။ ဤအရာအားလုံးကသူတို့ကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောက်ရွံ့မှုများနှင့်စိတ်ကူးယဉ်မှုများ၊ စွဲလမ်းမှုနှင့်အမှတ်တရများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များသည်အရာရာကိုသက်သေထူရန်လွယ်ကူသည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊
လွတ်လပ်မှုသည်ပိုမိုနားလည်မှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ တရားမျှတမှု၊ ပိုမိုထိန်းချုပ်မှု၊ အမှားအယွင်းများပိုမိုရရှိခြင်းနှင့်ပိုမိုနားလည်လာသည်ကိုပိုမိုယုံကြည်လာသည်။ “ အကယ်၍ သာ” စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုက၎င်းကိုကျွေးသည်။ Nope အလုပ်မလုပ်ဘူး
တောငျ့ထင်ယောင်ထင်မှား IS "သာလြှငျ"
သင်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်အလိုဆန္ဒသည်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖြစ်သောကြောင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခြင်းသည်“ မှန်ကန်သော” အရာမဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်ခံစားမိသလိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနက်ရှိုင်းဆုံးခံစားမှုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ရှိရင်းစွဲနှင့်မလိုချင်သောအရာများကိုတုံ့ပြန်ခြင်းမှလာသည်။ လိင်သို့မဟုတ်တကယ့်စိတ်ကူးယဉ်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေများနှင့်မကိုက်ညီပါကငြိမ်းချမ်းမှုမရှိနိုင်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ လများသည်နှစ်များသို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်း၊ အိပ်ပျော်ခြင်း၊ အိပ်ပျော်ခြင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲခြင်း၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုလုံးကိုအရောင်ပေးတဲ့ခါးသီးတဲ့လုပ်ရပ်။ လွတ်လပ်မှုဆိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်ဝေးလံသည့်နေရာ၌မြင်ယောင်နေသည်။ ၎င်းသည်အခြေအနေသာလျှင်ဖြစ်လျှင်ဖြစ်လာသည်။ ဘာမုသားလဲ။
အမှန်တရားမှာလွတ်လပ်မှုသည်ထိုအရာအားလုံးအပြင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး“ သာလျှင်” သည်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုယ်တိုင်ကကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးမှဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်သောစိတ်ကူးယဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ တကယ်တော့လွတ်လပ်မှုဆိုတာအခုပဲ! ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်တင်သောသို့မဟုတ်ကြောက်ရွံ့သောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလွတ်လပ်မှုကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည့်စွမ်းအားရှိသည်။ သို့သော်သင်၏အတွင်း၌ရှိနေခြင်း၏လွတ်လပ်မှုကိုမဖယ်ရှားပစ်ရန်နှင့်သင်၏တပ်မက်မှုနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုသည်၎င်းတို့ကိုသာဖုံးကွယ်ထားသည်။ မင်းအဲဒါကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်
သင်၏လက်ရှိလမ်းကြောင်း၊ အလေ့အထ ... သို့မဟုတ်ယုံကြည်ချက်သည်ထိုအကျွမ်းတဝင်ရှိသောလမ်းကိုမသွားနိုင်တော့ပါ။ သို့သော်သင်အခြားလမ်းမရှိသောကြောင့်သင်မှီခိုနေသည်။ မသေချာမရေရာမှုနှင့်အပြောင်းအလဲကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကသင့်ကိုစိတ်ဆင်းရဲစေပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်သွားခွင့်ပြုတာကအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာနားလည်အောင်ကူညီဖို့နာကျင်မှုထပ်မံပေးပါတယ်။ ဤသည်မှာအရာဝတ္ထုများကိုလွှတ်ပစ်ရန်အဆင်ပြေသည်သာမက၎င်းသည်လွတ်လပ်မှုအတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်တွင်ဘဝ၏အမှတ်အသားဖြစ်သည်။
သင်အမှန်တကယ်ဘုရားသခငျ, လွတ်လပ်မှု, ဝိညာဉ်တပြင်လုံးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတရားနှင့်သစ္စာတရားကို ... တကယ် ထွက်. get / ဘာမှမဆည်းပူးရန်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်သလား? သွားလာရင်းတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အနာရောဂါငြိမ်းစရာမှဝန်ခံချက်၏တစ်ခုတည်းသောစျေးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။
ငါတခြားနည်းလမ်းတွေ၊ စွဲလမ်းစေတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကြိုးစားပြီးကြိုးစားပြီးညင်ညင်သာသာချထားတာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့“ အဲဒါကိုလုပ်လိုက်ပါ” လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ဒါကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ။ ဘီလီယံနှင့်ချီသည့်အာရုံခံဆဲလ်များ စုစည်း၍ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့လွှတ်လိုက်ရင်ငါတို့လည်းမလိုချင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့လွှတ်လိုက်တဲ့အခါငါတို့မသေဘူး၊ ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ် - အတ္တ - ကျွန်ုပ်တို့ကိုသိစေချင်သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောသတင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်သေသည်ဟုခံစားရပြီး၎င်းသည်အတ္တကြောင့်သေခြင်း၊ တွယ်တာမှုသို့မဟုတ်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်၎င်းသည်ကောင်းသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ထိုအပိုင်းသေပါစေ။ တကယ်ဖြစ်လာတာကသင်လွှတ်လိုက်ရင်လိုအပ်မယ်ဆိုရင် ၀ မ်းနည်းပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျအတွင်းအာကာသကိုရှာဖွေ ... နားလည်သဘောပေါက်, အသေမဟုတ်, အချည်းနှီးသောအာကာသ ... ဒါပေမယ့်ရှိနေခြင်းနှင့်အတူနွေးထွေးစွာညင်ညင်သာသာအသက်ရှင်လျက်၏ဘဝ၏အနှစ်သာရနှင့်သင်၏စစ်မှန်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို။ ဘုရားသခ။ သင်၏အတွေ့အကြုံသည်မြင့်မားသော (သို့) ပြင်းထန်သောအတွေ့အကြုံမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပြင်းထန်သောဒေါသ၊ တပ်မက်မှုများကိုဖယ်ရှားရန်ဤပြင်းထန်မှုကိုမရှာဖွေပါနှင့်။ အဲ့ဒီလိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး
သင် GET အပ်
သွားခွင့်ပြုသည့်အခါသင်တုန်ခါ။ မသေဘဲအမြဲနေလေ့ရှိသည်။ အတွေး၊ ယုံကြည်မှု၊ စိတ်ကူးယဉ်မှု၊ စွဲစွဲလမ်းမှုရှိ၊ တကယ်တော့ ... အားလုံးပိုကောင်း။ ဆုများများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဤလွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်မည်သည့်ကျောင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောကျောင်းကမျှကျွန်ုပ်တို့ကိုပြင်ဆင်မပေးနိုင်သည့်လမ်းတစ်လမ်းချင်းစီလမ်းလျှောက်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်။ စိတ်, ၎င်း၏ဆူညံသောသတိပေးချက်များနှင့်ပူးတွဲပါရှိခြင်းနှင့်အတူသင်မဟုတ်ရင်ယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်နှင့်ကသိတယ်အားလုံးအတိုင်း, ကွင်း၌သွားသည့်သင်၏စိတ်ဆင်းရဲလမ်းပေါ်မှာသင်လုံခြုံစောင့်ရှောက်ရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်နာကျင်မှုကိုပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခကိုထပ်ဆင့်မထည့်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏နာကျင်မှုမှာမဆိုးပါ။ အမှန်တရားသည်၎င်းနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများထက် ပို၍ ကြင်နာတတ်သည်။ လူ့နာကျင်မှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုလောင်စေသောမီးနှင့်တူသည်၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့လုပ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကကျွန်ုပ်တို့ကိုရှူရှိုက်မိစေတဲ့အပြင်မီးခိုးထွက်သွားစေတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တူတယ်။ ငါတို့ကမီးခိုးစက်တွေပါ။
ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောနေရာကိုအသုံးပြုရန်၊ ဤအမျက်ဒေါသကိုထိန်းချုပ်ရန်၊ ဤကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ ၎င်းသည်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်သလိုဟန်ဆောင်ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်…ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုမျှလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလွတ်လပ်သောလွတ်လပ်ခွင့်အဖြစ်ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အားလုံးသည်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ တစ်စုံတစ်ရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ပြောင်းပြန်ကတော့မှန်ပါတယ်။ ငါတို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ် ၀ တ္ထုတွေ၊ ဝတ်စုံတွေ၊ ကြောက်စိတ်တွေ၊ စွဲလမ်းမှုတွေ၊ ဒဏ္legာရီပုံပြင်တွေကိုစွန့်လွှတ်ရမယ်။ သင်ဟာအားနည်းချက်ရှိနိုင်တယ်၊ ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့လှေခါးထစ်လိုမျိုးကနူးညံ့နေတယ်။ ၎င်းကိုရွေးချယ်ပြီးသော်လည်းပြုံးပါ။ ဒါကတိုးတက်မှု, ပုံမှန်အတိုင်း muck မဟုတ်ပါဘူး။
ငါတို့ခုခံတွန်းလှန်ရသည့်အရာတစ်ခုမှာငါတို့လက်ကို တင်၍ လက်ခံရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့လုပ်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ အကယ်၍ သင်နာကျင်မှုကိုလက်ခံပြီးသင်ရောက်ရှိနေစဉ်အတွင်းမသိသောသူနှင့်ဝင်လာလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။ သင်၏စိတ်ထဲတွင်“ ဤနာကျင်မှုများစွာရှိပါက…ခုခံကာကွယ်ခြင်းမရှိဘဲစောင့်ဆိုင်းနေရုံသာမကသင်၏တွေးတောဆင်ခြင်မှုနှင့်အဆုံးမဲ့ခန့်မှန်းချက်များ…အော်လျှင်လည်း ပို၍ ဆိုးရွားလိမ့်မည်!” အော်လိမ့်မည်။ သို့သော်ယင်းသည်မှန်ပါသလော။ စိတ်သည်တာဝန်ခံဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဝိညာဉ်ကို ဦး ဆောင်သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ သင်သာရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အနည်းဆုံးကအကြောင်းစပ်စုရ။ ဒါကပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကောင်းတစ်ခုပါ။
သငျသညျအလိုဆန္ဒဖယ်ရှားပစ်ဘယ်တော့မှစေခြင်းငှါပေမယ့်ပြtheနာမဟုတ်သောကြောင့်အဆင်ပြေပါတယ်။ အပူတပြင်းဖြစ်သည်။ ထိုမှီခိုမှုမှလာသည် - သင်၏တကယ့်စွဲလမ်းမှုဖြစ်သည်။ လိင်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဟာမှီခိုနေရတဲ့ကင်းမဲ့မှုမှထွက်ပေါ်လာတာပါ။
ငါပထမ ဦး ဆုံး“ ငါ့ကြိုးကိုမိန်းမတို့အားဖြတ်” ရတယ်။ ကျွန်တော်ဒီကိုးကားချက်ကိုဆမ်ကိန်းကရတယ်။ အဲဒီမှာအမျိုးသမီးတစ် ဦး ပါဝင်နိုင်မလား။ ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်နိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်အတွက်“ အမျိုးသမီးများ” ဆိုသည်မှာအကျွမ်းတဝင်၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းfemတ္ထိသူကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်း၏ဝေးကွာသောနေရာတွင်…ငါ့ကိုလှောင်ပြောင်သည်။ ငါ့ကိုပြုံးရန်၊ ငါထောင်ဂဏန်းဒေါ်လာကိုထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည့်တန်ဆာပုံစံကိုပြည့်တန်ဆာအဖြစ်ပေးခဲ့တယ်။ စွဲလမ်းမှုစိတ်စွဲလမ်းမှုကြောင့်ကျွန်တော့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ငါနှလုံးသားထဲမှာနွေးထွေးမှုတစ်ခုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုငါရေးလိုက်တယ်။ ငါ့ဝိညာဉ်ကိုငါမတည်ဆောက်။ ငါကဖုံးကွယ်သောအခြား shit ၏သွားခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်သူကိုယ်တိုင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ငါ့ကိုစိတ်ဝိညာဉ်အစိတ်အပိုင်း။
တစ်ခုခုလိုချင်ပါသလား။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော EGOIC Longing နှင့်နှစ်
ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင့်တသောသို့မဟုတ်တစ်ခုခုကိုတောင့်တသောအခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့အမှန်တကယ်လိုချင်သောအရာမှာပျောက်ဆုံးနေသောမိမိကိုယ်ကိုအပိုင်းအစတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုတွေ့သောအခါ၎င်းသည်မှန်ကန်ရုံသာမကမရရှိနိုင်ပါ - သင်မရရှိနိုင်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့လို့ပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းစိတ်အဖြစ်မှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်အဖြစ်မှန်ထင်ဟပ်။ အဘယ်အရာကိုပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအမြဲပြင်ပလောကရှိတက်ပြပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဝိညာဉ်အားဖြင့်ချိတ်ဆက်လုံးဝပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပါ။ , ရေရှည်တည်တံ့သည့်ခံစားသင့်ကိုယ်ပိုင်ပြည်တွင်းရေးနွေးထွေးမှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုဂျသက်ဆိုင်သောကျန်းမာ ... ပြင်ပ form မှာအတူဆက်ဆံရေး ... တစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုနှင့်ကြုံတွေ့ရသောအခါကျွန်ုပ်တို့ပျောက်ဆုံးနေသောအပိုင်းအစတစ်ခုအတွက်အပြင်သို့ရောက်ရှိနေပြီသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိကြောင်းမေ့နေသည်။ အဆိုပါအမြီးအမောက် ... အတွင်းပိုင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပြည့်ဝ၏ ... ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၏တောင့်တင်းခြင်းဖြင့်ရေနစ်သေဆုံး! ခြားနားချက်ကိုသင်မြင်သလား
သငျသညျပြင်ပမှတစ်ခုပြည်တွင်းရေးနာဖြည့်ဖို့ဘာမှမတှေ့ရတော့မှပါလိမ့်မယ်။ လိုသော (သို့မဟုတ်မရှိခြင်း) ၏ပြင်းထန်မှုကနေဖွဲ့စည်းထားသည့်အခြေအနေမဆိုဆက်ဆံရေးအလုံအလောက်မခံရ။
သင်လူလွတ်လား? “ ငါဘယ်တော့ချစ်ရမလဲ?” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုသင်မေးဖူးပါသလား။ အဖြေကရိုးရှင်းပါတယ် သင်၏အတွင်း၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ရွေးချယ်သောအခါသင်၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ နွေးထွေးမှု၊ ရှင်သန်မှု၊ သင်၌ရှိနေခြင်း။ အသက်ရှင်နေသည်။ အခြားအရာအားလုံးအလယ်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြည်တွင်း၌တွေ့ကြုံခံစားမိပါက၊ ၎င်းသည်အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ အုပ်စုတစ်စုလား။ လူတစ်ယောက်? အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်? သူငယ်ချင်းများလား ဒါကိုသင်မထိန်းချုပ်နိူင်ဘူး။ အတွင်းပိုင်းနာကျင်မှုကိုဖြည့်စွက်ရန်သင်ပြင်ပတွင်ရှာဖွေနေခြင်းကြောင့်၎င်းပေါ်လာခြင်းမရှိပါ။ သင့်ပြည့်ဝမှုကနေလည်ပတ်ပြီးအရာအားလုံးလာလိမ့်မယ်။
LINK - ၃၅ နှစ်အကြာမှာပုံတူပုန်းအောင်းခြင်း၊
BY - Nigel
ထိုအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တကယ့်အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်နက်ရှိုင်းစွာစီးဆင်းနေသောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ဘဝရောက်နေပြီဟုမဆိုလိုပါ၊ ဤသည်မှာလွတ်လပ်စွာရေးသားခြင်းဖြစ်သည်ဟုမခံစားရပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်တာကာလအတွင်းအသက်ရှင်ခြင်း၊ အမှန်တရားနှင့်မှားယွင်းခြင်းတို့အကြားနိုးထစေသောခရီးတစ်ခု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်ရှုပ်ထွေးမှုကိုအပြုသဘောနှင့်ဘဝကိုအတည်ပြုသောအရာအဖြစ်အသုံးချခဲ့သည်။ ပြီးတော့ငါ့အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲသွားတဲ့အိမ်ထောင်ရေးဟာဘယ်တော့မှမပြည့်ဝနိုင်တဲ့လှည့်စားမှုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်မဖျောက်ဖျက်နိုင်တော့ဘူး၊ ပြီးတော့သူမကဝမ်းနည်းနေတဲ့ခံစားမှုခံစားနေရပေမယ့်မလုံလောက်တော့ဘူးလို့အခုတော့အရင်ကထက်ပိုကောင်းလာပြီ။ ငါနေဆဲ (သူမ) ရုန်းကန်နေဆဲနှင့်၎င်း၏မစုံလငျပေမယ့်ငါအရင်ကထက်လမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။
ငါ့ရဲ့ ၀ တ္ထုဟာအထီးကျန်ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျားအတွက်အရင်ကငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၊ ချိုင်းထောက်၊ အဖော်၊ ဆက်သွယ်မှု၊ တကယ့်မိတ်ဖက်၊ ဤကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိဇနီးတစ် ဦး ရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကူးယဉ်တွယ်တာမှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုသို့မဟုတ်ကွဲလွဲမှုရှိလိမ့်မည်ဟုသင်မြင်လား။ သူတို့မကြာခဏ! အမျိုးသားများသိသင့်သည် ကျွန်ုပ်၏ ၀ တ္ထုကိုယခုရောက်ရှိခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်၊ ဇနီးတို့နှင့်တကယ့်ဆက်နွယ်မှု၊ ဘဝနှင့်အခြားအရာများအတွက်အသုံး ၀ င်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးကိုသူမနည်းတူလေးစားမှုဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ ဒါဟာ 100% သွားကြောင်းမပြုစေခြင်းငှါသော်လည်းငါကကျော်လွန်ပြီးတိုးချဲ့ပါတယ်။ ထိုအကအားလုံးသွားကြကုန်အံ့အကြောင်းပါ။
အတိုချုပ်အားဖြင့် fetish ကို ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးပုံမှန်အားဖြင့် (ရေမရရှိနိုင်ပါကငါးကိုမေးမြန်းခြင်းကဲ့သို့) ထူးခြားသည့်အရာအဖြစ်မမြင်ဘဲသွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကအမျိုးသမီးများ၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမများနှင့်အစ်မများသည်လမ်းများပေါ်တွင်ခြေချောင်းများ၊ ကလေးငယ်များရှေ့တွင်ခြေထောက်ဖြတ်ကျော်သွားသောအခါ၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်အပြုံးများ၊ အသံကျယ်သံများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခိုင်လုံသောအတည်ပြုချက်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ပြင်းထန်စွာဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းစသည်တို့သည်တိုင်များအားဝတ်ဆင်ကြသည်။ ဤအသင်းအဖွဲ့များသည်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုသတိမပြုမိဘဲလူ့စိတ်သည်အသင်းအဖွဲ့များနှင့်သင်္ကေတများကိုနှစ်သက်ပြီးအထူးသဖြင့်အခြားထင်မြင်ချက်များမရှိခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုဇာတ်ကြောင်းထပ်ထည့်သည်။ သို့နှင့်အစေ့များသည်ထိုအတွင်းပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရိုင်းစိုင်းစွာကြီးထွားလာသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာမည်နှင့် ပတ်သက်၍ လျှို့ဝှက်နက်နဲသည့်အရာမရှိပါ။ သို့သော်သင်္ကေတနှင့်ဇာတ်လမ်းသည်အမှန်တကယ်မဟုတ်ပါ (သူတို့နှစ်သက်ကြသော်လည်း) ၎င်းသည်အမှန်တရားတစ်ခုလုံးမဟုတ်ပါ။ အမှန်တရားကိုသင်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါ…သူတို့ဟာကွဲပြားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခု၊ ပိုပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကိုယူပြီး၊ သင့်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာပြောင်းလဲသွားတယ်၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကသင့်ကို“ ခွဲခြားသိမြင်ခြင်း” ကိုမဖော်ပြတော့ဘဲသူတို့ကိုလွယ်ကူစွာဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။ ရှေ့ကိုခုန်နေတယ်
၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းကငါတို့ဖက်ရှင်တွေဝိုင်းရံနေရုံသာမကမင်းကမင်းလိုငါ့မှာဆိုးဆိုးရွားရွားမိဘတွေရှိခဲ့ရင် (အဝေးကအမေကလျစ်လျူရှုခံရသည်သို့မဟုတ်လျစ်လျူရှုထားလျှင်) စိတ်သည်လည်းစိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်သို့ကူးပြောင်းသွားလိမ့်မည်။ မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိပြီးဤနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများနှင့်အတွေးအခေါ်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်လာခဲ့သည်သို့မဟုတ်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှချိုင်းထောက်များဖြစ်လာသည်။ - ဥပမာ။ Sears ကတ်တလောက်လိုလှပသောအမျိုးသမီးများမြင်တွေ့၊ သိ၊ လက်ခံ၊ အတည်ပြုနိုင် (စိတ်ချရ) ကိုတောင့်တသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည့်အားဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်လိုကြသည်မဟုတ်လော။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ရင်းနှီးမှုနှင့်ရင်းနှီးသောရင်းနှီးမှုကိုလိုချင်သည်မဟုတ်လော။ ကျနော်တို့လုပ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ fetish ရဲ့ကုလားကာ၊ နံရံဒါမှမဟုတ်အလယ်အလတ်ကတဆင့်ဆက်သွယ်ဖို့မလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမှငါ့ကိုမပြောဘူး
ဒါကြောင့်အစောပိုင်း coding အပေါ်ပြန်လည်စုစည်း။ အမျိုးသမီးများသည်နိုင်လွန်ကဲ့သို့ယောက်ျားများဝတ်ဆင်သည့်အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်အဝတ်အစားများ =“ အပိုfemတ္ထိ၊ ကွဲပြားခြားနားပြီးနက်နဲသောအရာ” ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်စောင့်ရှောက်သူများဖြစ်ကြသည်။ ကုဒ် =“ စွမ်းရည်ပြည့်ဝစွာရင်းနှီးချစ်ခင်ခြင်း” Sexy အဝတ်အစားများ =“ essတ္အရိပ်လက္ခဏာ” ၏သင်္ကေတ၊ ကျွန်ုပ်သည်“ အ core မေရိကန် missing ပျောက်ဆုံးနေ” သည်။ အစဉ်အဆက် "ကရ" ။ ဒီအခြေခံကုဒ်များအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့အခါ ... ထို့နောက်အရာအားလုံးကြောင်းကနေတည်ဆောက်သည်။ လောင်းကြေးသည်မြင့်မားသည် (သတိရှိရှိခွဲခြားလျှင်) သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ကိုအာရုံစူးစိုက်။ သူတို့ယူသွားသည်ဟုထင်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်ဆက်စတင်သည်။ အထူးသဖြင့်ယခုအချိန်တွင်အွန်လိုင်း porn နှင့်ပုံရိပ်များပြန့်နှံ့မှုနှင့်အတူယောက်ျားလေးများသိသင့်သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီအမှားအယွင်းရှိတဲ့အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာနာကျင်မှုနဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကိုကျွန်တော်တွက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ယခုငါအသစ်တစ်ခုကိုရင်းမြစ်ရှိသည်! ကျွန်တော့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊ အတွေးတွေကအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။ ငါရှေ့ခုန်လိုက်တယ်
အနှစ် ၂၀ ကျော်အတွင်းသူသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာပြီးကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုဖြတ်ကျော်ခဲ့ပြီး (လိင်အင်္ဂါ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စဉ်) အခြားလိင်လုပ်ရပ်များဖြစ်သည့် - စိတ်ကူး၊ အဲဒီနောက်အမျိုးသမီးလွှမ်းမိုးမှုထဲဝင်လာတယ်။ ပြီးတော့ငါက pantyhose၊ နှုတ်အားဖြင့်အရှက်ခွဲခြင်း၊ နောက်ဆုံးတော့ S&M နှင့် bi ။ သင်တိုးတက်မှုမြင်နိုင်ပါသည်။ အဲဒါကမင်းကိုအပြုသဘောလား လွတ်လပ်မှုလိုလား။ အလွန်အစွန်းရောက်သောအချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုလိုချင်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်ကိုဖြစ်စေ၊ တနည်းကား ... နက်နဲသောအရာတခုမျှမရှိတော့ပါ။ အမှန်တကယ်ပင်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသည်။ အခြားကုဒ်ပေါ်တွင်ချို့ယွင်းချက်ကုဒ်တည်ဆောက်ခြင်း။ သို့သော်ကုဒ် (အတွေးများ) သည်အမှန်တရားမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်“ ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိသေသလက္ခဏာ” မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကသင်တည်ဆောက်ချင်တဲ့အရာအားလုံးကိုတည်ဆောက်နိုင်ပေမယ့်အားနည်းချက်ရှိနေသေးတယ်။ နောက်တဖန်ငါ digress ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ပိုမိုတိုးတက်မှုများနှင့်ကျွန်ုပ်လက်မထပ်မီ ၁၅ နှစ်တာကာလအတွင်းပြည့်တန်ဆာများနှင့်အကြိမ်ပေါင်း ၅၀ ကြိမ်ပြုမူခဲ့ပြီးမဂ္ဂဇင်း ၁၀,၀၀၀၊ အပြာရုပ်ရှင်ရုံများ၊ အင်တာနက်နှင့်မရေမတွက်နိုင်အောင်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြုန်းတီးခဲ့ရသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျ၏အရေးအသားအတွက်ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်သဘောပေါက်နိုင်သကဲ့သို့ငါငါ၏အ fetish ကိုသို့ဆက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါလက်ထပ်သည့်အခါထွက်သရုပ်ဆောင်ရပ်တန့်ပေမယ့်ငါသရုပ်ဆောင်ဆက်လက်! ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အမှားပြင်ခြင်းတွင်မပါ ၀ င်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဇနီးကိုတိတ်တဆိတ်သို့မဟုတ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အပြစ်တင်ပြီးအိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်သည့်အထိသူနှင့်အထီးကျန်ဆန်နေသည်ဟုခံစားရပါလိမ့်မည်။ သူမကကျွန်တော့်ကိုလျစ်လျူရှုမိသည်၊ သို့မဟုတ်သူမည်သို့သိသည်နည်းနည်းလေးပြောပြလိုသည့်ကောင်လေးတစ်ယောက်လိုရူးသွပ်နေသည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ငါလျစ်လျူရှုမိသည်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးသူမကိုကျွန်ုပ်၏ဘဝနာကျင်မှုနှင့်ခွဲနေခြင်း၏အကြောင်းရင်းနှင့်ပစ်မှတ်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ဆန်၊ သူမကငါ့ကိုတစ်ခုလုံးနှင့်တူခံစားမဟုတ်, နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ချစ်ရသူသည်ငါ့ကိုသိသာအကြောင်းမရှိဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်သူမသာငါ့အ fetish သို့ဝင်နှင့်သာလျှင် ... ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးငါ့ဖြစ်တည်မှု၏အမှန်တရားနှင့်အတူကိုက်ညီလိမ့်မည်အဖြစ်ဘဝကြီးမြတ်လိမ့်မယ် - ငါ၏အ pantyhose ကဗျာ။ ကုဒ်တွင် 'if ထို့နောက် and result' ယုတ္တိဗေဒရှိသည်။ အသံအကျွမ်းတဝင်?
တနည်းကား ... နက်နဲသောအရာတခုမျှမရှိတော့ပါ။ အမှန်တကယ်ပင်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသည်။ ကုဒ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ခြင်းကုဒ်။ သို့သော်ကုဒ် (အတွေးများ) သည်အမှန်တရားမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့မဟုတ်သလိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝိသေသလက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင် (အနှစ်သာရ၊ အမှန်တရားနှင့်လွတ်လပ်မှု) သည်ယုတ္တိဗေဒအရဆိုလျှင် - ဆိုလိုသည်မှာခြွင်းချက်အရာ၊ အတော်လေးကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အတွင်းစိတ်လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြမထားဘူး။ ငါပြောနေသည့်အရင်းအမြစ်သစ်မှာအခြေအနေမရှိတော့ပါ။ မည်သည့်နေရာသို့မျှမသွားနိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆူညံနေသောယဉ်ကျေးမှုတွင်ဒစ္စနေး၊ ဂျက်ကက်စ်ကိုကြည့်ခြင်း၊ ကွန်ပြူတာဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းစသည်တို့ကိုသင်ကြားခြင်းမရှိပါ။
အကယ်၍ သင့်တွင်အလင်းရောင်အနည်းငယ်သောအရာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုခုကိုသင်နှစ်သက်ပြီးသင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကနှစ်သက်ပါကဤဆောင်းပါးသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်အလင်းရောင်အလေ့အထရှိပြီးသင်၏အဖော်သည်မစားပါကဤဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိသကဲ့သို့ဤဆောင်းပါးသည်အသုံးမ ၀ င်ပါ။ သင့်မှာနက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေပြီးလိင်မှုကိစ္စပြတ်တောက်မှုရှိရင်မင်းရဲ့ဘဝကိုအုပ်ချုပ်ပြီးမင်းကိုပြissuesနာတွေဖြစ်စေပြီးမင်းကြီးပွားတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်မင်းကအကြံပေးကောင်းတစ် ဦး နဲ့အကြံဥာဏ်တောင်းဖို့လိုတယ်။
အောက်ပါအတွက်အခြားသတင်းများ 1 FOR ကူညီရန်7နည်းလမ်း6(က FETISH အပိုင်းနှစ်ဦး၏ Next post ပါစေ GO ကိုကြည့်ပါ)
၁။ ဝိသေသလက္ခဏာနှင့်စိတ်ဓာတ်။ ဝိညာဉ်ရေးရာကိုမပျိုးထောင်ဘဲဤအရာကိုငါလုပ်နိုင်သလား။ A- တကယ်မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ရဲ့ fetish နဲ့ခွဲခြားသိမြင်လာပြီး၊ နာကျင်မှုတွေကြုံရပေမယ့်ခွဲခွာခြင်းကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အဓိကပြissueနာကပျော်ရွှင်မှုကြောင့် fetish ဆီကိုမသွားဖို့ပါ။ ငါတို့အမြဲတမ်းပြုခဲ့သောအရာ
ခင်ဗျားတို့သိတယ်၊ ငါတို့မှာစိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုနဲ့စွဲလမ်းနေတယ်။ တစ် ဦး စွဲ။ ပြီးတော့ငါတို့ ဦး နှောက်ထဲမှာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့အာရုံခံဆဲလ်တွေကိုကြိုးနဲ့ချိတ်ထားတယ်၊ အဲဒါကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါငါတို့တွေစားတဲ့စွဲလမ်းစေတဲ့သဘာဝဓာတုပစ္စည်းတွေများလာတယ်။ ပိုဆိုးသည်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တွင် fetish ရှိသည်“ ကျွန်ုပ်သည် fetish ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ရှိရမည်” အဆင့်တစ်ခုတွင်ဖြစ်လာသည်။ သို့မှသာကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်၎င်းကိုလွှတ်ပေးလိုသနည်း။ ၎င်းသည်သင်၏လက်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အစိတ်အပိုင်းကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ် ပို၍ ပင်ဆိုးရွားသည်။ ဟုတ်လား ) ဖော်ထုတ် = ပူးတွဲ = အတူတကွဖျူး = လျှက်ရှိကြောင်း။ ငါတို့ဟာစကားပြောဖို့လိုတယ် ငါတို့မူကား၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအဆင့်မှပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။ သင်စမ်းကြည့်လျှင်နည်းနည်းကြာပေမည်၊ သို့သော်ပြန်လာလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ ကိုကျော်လွှားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ထောင်ရေးသည်ပြိုကွဲသွားသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့လုံခြုံမှု၊ လူသိများပြီးပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း (သို့) လုံခြုံမှုရှိသည့်တစ်ခုတည်းသောယုံကြည်စိတ်ချရသောနေရာကိုစွန့်ခွာသွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးမည်ကိုစိုးရိမ်ကြသည်။ ဟုတ်လား သင်အဲဒီမေးခွန်းထုတ်ရမယ်။ အမှန်တရားကားအဘယ်သို့အသစ်သိချင်စိတ်အဘို့အ fetish ဇာတ်လမ်းများလောင်စာသောသိချင်စိတ်အချို့ကိုညွှန်ကြား။
မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ထင်တာကမကောင်းတဲ့ကုဒ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်စကားကိုနားထောင်တာကမင်းကိုအမှန်တရားလက်လှမ်းမှီမှသာလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ထဲ - အာရုံခံဆဲလ်များ၊ ဝါယာကြိုးများ - သင်္ကေတ - ဦး နှောက်အစိတ်အပိုင်းများမှဖြေရှင်း။ မရနိုင်သောကြောင့်စဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ဤ“ ဖယ်ရှားပစ်ခြင်း” ကိုမရနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? စိတ်၏အဘယျစိတျအပိုငျးအခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအပေါ်အခွင့်အာဏာတောင်းဆိုထားသည်? သငျသညျဤကဲ့သို့သောအသိုင်းအဝိုင်းသွားပါလိမ့်မယ် - "ငါကအရှုံးမပေးရန်လိုအပ်သည် ... ဒါပေမယ့်ငါနဲ့ငါ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှုံးမပေးနိုင်" ဒါဟာအဆုံးမဲ့ဖြစ်လာသည်။ သတင်းကောင်းသည်သင်မဟုတ်သောအစစ်အမှန်မဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်အတုအယောင်ကိုယ့်အတ္တဖြစ်သည်။
စကားမစပ်ငါစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများစွာကိုဤကဲ့သို့သောလည်ပတ် - ထင်သာ fetish မဟုတ်ပါဘူးထင်ပါတယ်။ သူဟာအရက်အလွန်အကျွံသောက်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခဲ့တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုသူသိတယ်၊ သူဟာအောင်မြင်တဲ့ VP တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိလို့သူ့အလုပ်ပျောက်သွားတာမို့လို့ပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး ။ အနည်းငယ်ခြားနားချက်။
ငါ၏အ fetish ၏အောက်ပါစဉ်းစားကြည့်ပါ ...
က) အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂ နှစ်အရွယ်တွင်မျိုးဗီဇဆိုင်ရာအတိအကျဖြင့်မွေးဖွားပြီးနယူးဇီလန်ရှိမွေးမြူရေးခြံတစ်ခုတွင်မွေးစားခြင်းခံရလျှင်၊ မိဘများနှင့်လုံးဝကွဲပြားသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ထိတွေ့မိပါက ... ကျွန်ုပ်သည်နိုင်လွန်ဖက်ရှ်တစ်ခုရနိုင်ပါမည်လော။ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီတော့ဒါကငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပဲ။ ဒါကငါ့ကိုဆုတ်ခွာနေသော်လည်းငါ့ကိုလွှတ်ခွင့်ပြုသည်။
ခ) ဒါမှမဟုတ်မနက်ဖြန်ဆိုပါစို့။ ဘိုးလင်းဘောလုံးကငါ့ခေါင်းကိုကျပြီးငါ့ရဲ့ fetish ကိုလုံးဝမေ့သွားတယ်ဆိုရင် (ငါ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု၊ မျိုးဗီဇ၊ မိသားစု၊ ဝါသနာ၊ အတွေးအမြင်စတာတွေအပါအ ၀ င်) အတူတူပဲ… fetish သာပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ပေါ်ထွက်လာနှင့်နေဆဲ "ငါ့ကို" ကဲ့သို့ခံစားရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ငါ fetish ကပ်ပါးကောင်မပါဘဲအများကြီးပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးအသက်ရှင်လျက်ခံစားရပေမည်။ အဆိုပါ fetish သင်မဟုတ် ... ဒါကြောင့်သင်ကအရှုံးမပေးအတွက်လုံခြုံခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ဆုတ်ခွာခြင်းမှတဆင့်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်တူသည်ဟုခံစားရလိမ့်မည်ဟုသတိပြုပါ။ ထိုအ ok ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကအဆင်ပြေချောမွတ်လိမ့်မည် ၁၀၀% ကမင်းကိုထိတ်လန့်စေလျှင် ၅၀% ကြိုးစားပါ။ ငါ့အတွက် ၉၀% ကိုငါစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ၊ ဒါပေမယ့် ၁၀% ကဒီနေရာမှာရှိနေတယ်။ အခုဆိုရင်သစ်သီးယင်ကောင်တွေနဲ့တူတယ်။ ငါ့ဘဝကိုမအုပ်ချုပ်ဘူး၊ ငါကအာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့လည်းကြီးထွားလာတယ်။
၂။ လက်ခံခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်း။ အဲဒါကိုမတိုက်နဲ့၊ သဲနပ်လိုပဲ…မတိုက်ပါနဲ့။ ဤသည်ကပိုအရှက်ကွဲစေသည်။ ပြီးတော့ဒရာမာ…စိတ်တွေကဒရာမာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းကပိုဆိုးသွားမှာပါ။ အဲဒီအစား ... ကိုလက်ခံနှင့်ချဲ့ထွင်။ ၎င်းကိုလက်ခံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆွေများ၊ ကုထုံးပညာရှင်သို့မဟုတ်အဆင့် ၁၂ ဆင့်ကိုပြောဆိုပါ။ ၎င်းသည်၎င်းကိုလျစ်လျူရှုခြင်းနှင့်၎င်းသည်မတည်ရှိခြင်းဟုလည်းမဆိုလိုပါသို့မဟုတ်၎င်းသည်လည်းကြီးထွားလာလိမ့်မည်။ ဒါကငြင်းပယ်မှုပါ။ ဒါကြောင့်ဖိနှိပ်မှုနဲ့ငြင်းပယ်မှုနှစ်ခုလုံးကအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ တတိယနည်းလမ်း - ၀ ိညာဉ်ရေးရာလက်ခံမှုလမ်းကြောင်း။ လက်ခံပါ။ ပြီးတော့ ၀ ိညာဉ်အပေါ်အခြေခံတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းကိုလက်ခံခြင်းနှင့်၎င်းသည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ and မှပါ ၀ င်သည်နှင့်သင်၏အသိပညာ - သင်၏အနှစ်သာရ - သင်၏ ၀ ိညာဉ် - သင်၏အမှန်တရား - ၏နွေးထွေးသောနေရာမှမည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုလက်ခံပါ။ ဒါကအပြုသဘောဆောင်တဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကသင့်ရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုအမှန်တကယ်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်ရဲ့ ၀ င်မှုနှင့် fetish ရဲ့ဆူညံသံ၊ သင့်အတွင်း၌အမှန်တကယ်လွတ်လပ်မှုရှိသော်လည်းပြင်ပမှပြင်ပပြုပြင်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ကူးကြည့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုမရနိုင်ပါ။ ၎င်းကိုသင်စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်အတွင်းစိတ်လွယ်ကူသော၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောတည်ရှိမှု (စိတ်ဓာတ်) ထဲသို့ကျခြင်းသည်သင်နှင့်အပြည့်အဝခံစားရသည်။ သင်သည်ဘုရားသခင်၏တိုးချဲ့မှုတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးသူကိုဖန်တီးသူဖြစ်ပြီးယခု၎င်းကိုသင်ရိုသေလေးမြတ်လာသည်။
သို့သော်ဘုရားသခင်အကြောင်းကျွန်ုပ်ကြားသိနှင့်ဖတ်ရှုရာများသည်များသောအားဖြင့်မိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ပြSantaနာများကိုဖယ်ရှား။ ပျောက်ကွယ်သွားစေမည့်ကလပ်အသင်းရှိ Santa Clause သို့မဟုတ်အားကြီးသောလူဖြူလူသားမဟုတ်ပါ။ ငါဆိုလိုသောဘုရားသခင်မှာအရင်းအမြစ်နှင့်အဆုံးမဲ့ -“ ငါဖြစ်၏” သို့မဟုတ်ဖြစ်ခြင်း - သက်ရှိအသိပညာတစ်ခု (အတွေးများနှင့်အလွန်ကွဲပြားသည်) ။ နောက်တဖန်အတွေးများကိုကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ဖြား။ ဘုရားသခင်သည်မကောင်းသောအရာ၊ ကောင်းသောအရာကိုတွေးခြင်းသည်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ဘုရားသခင်ကသာ“ ဖြစ်” တယ်၊ သင်လည်းအဲဒီလိုပဲမင်းတို့လည်းမင်းတို့ပဲ။ သင်ဟာလူသားပဲမဟုတ်ပါ (ဝါယာကြိုးများနှင့်သွေးကြောများ)၊ သင်ဟာလူသားဖြစ်လို့ပါ။
ဒီတော့ခင်ဗျားကဒီအသက်ရှင်နေတဲ့အသိအမြင်ကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်တယ်။ အတွင်းအလင်းသို့မဟုတ်ပိုများသောအားဖြင့်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မှုကိုပျောက်ကင်းစေပြီးနွေးထွေးပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ (သို့သော်ဆန့်ကျင်ဘက်မရှိဘဲ)
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါသင်၌သင်၏ကိုယ်ပိုင်အယူအဆရှိသည်သေချာပါတယ်။ သင်သည်ဤ fetish ကိုလက်ခံခြင်းသည်သင်၏အတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးသင်၏ compulsive attachment ကိုလက်ခံသည်နှင့်အမျှသင်ကဝိရောဓိအနေဖြင့်ရွေးချယ်မှုအားဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။ အသီးမသီးသောအဆိပ်အတောက်စိုက်acကရှိခြင်း။ သင်၏စွမ်းအင်ပြောင်းလဲခြင်းအားလုံးကိုဖြုန်းမည့်အစား၊ ထိုတွင်ရှိရန်ခွင့်ပြုပါ။ seedsကအသစ်များတွင်မျိုးစေ့အသစ်များတိုးချဲ့။ စတင်စိုက်ပျိုးပါ။ သို့သော်သင်ရွေးချယ်ရမည်။ ဘဝကိုရွေး၊ ရွေးချယ်ပါ။ မင်းထက်အခြားဘယ်သူမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ရှိနေသော်လည်းရွေးချယ်ပါ။ နေသော်လည်းဂိမ်း changer ဖြစ်ပါတယ်။ အဟောင်းရှိ ... သင်မူကားအသစ်များကိုဖြည့်တင်းနေကြသည်။
၃) ၁၂ သင်နှင့်အနီးအနားရှိရပ်ကွက်တစ်ခုကိုရှာပြီးထိုင်ပါ။ ပထမတော့ကြောက်စရာကောင်းသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်အလားတူပြissuesနာများနှင့်ဒိုင်းနမစ်၊ ၄ င်းတို့၏အရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ အစားအစာ၊ လောင်းကစား၊ တာဝန်ယူပြီးကိုင်တွယ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး3ပေစာအုပ်ဖတ်ပါ။
အဆင့် ၁၂ ဆင့်မှတစ်ဆင့်သာမန်လူအများစုသည်သူတို့၏အပြုအမူများကိုညှိနှိုင်း။ သူတို့၏ရူပါရုံများနှင့်တန်ဖိုးများကိုပြည့်မီရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ငါ fetish ရှငျဘုရငျဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၏။ ကျွန်ုပ်၏လိင်ဆိုင်ရာ fetishistic အပြုအမူများသို့မဟုတ်ဆန္ဒများကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်၏တန်ဖိုးများ (ဇနီး၊ ဘဝ၊ စိတ်ဓာတ်၊ ဆက်သွယ်မှု၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်အဖိုးတန်သောအချိန်) ကိုချိန်ညှိခဲ့သည်။ အရာအားလုံးကပတ်ပတ်လည်သူ့ဟာသူ alignment ကို ... ကစိတ်ဆင်းရဲခဲ့ပါတယ်။ Reverse!
ကျွန်တော်တို့ကိုအရာရာပေးဖို့ဆန္ဒရှိပါစေ။ ငါပေါင် ၅၀ လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ အဲဒါက 'ငါ' လို့ပဲထင်ခဲ့တာ။ ဘယ်လိုလဲ? ဘူဖေးကိုစိုက်ကြည့်နေရင်း ... ချောကျိကျိအစားအစာလိုချင်တယ်၊ ငါ့တံတွေးကိုခံစားနေရတယ်၊ ဒါပေမဲ့အသုပ်နဲ့ဟင်းချိုကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။ ငါထပ်ခါထပ်ခါငါလုပ်ခဲ့တယ်။ လိုနေသော်လည်း။ ကျမစိတ်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုကြောင့်ဒီလွတ်လပ်မှုအသစ်ကိုမရခဲ့ပါဘူး။
မဆိုစွဲလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟာအသက်ရှင်လျက်အရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်တစ် 12 ခြေလှမ်းနှင့်ယုံကွညျခွငျးရှိဖို့လိုကျနော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သေချာတာပေါ့ကျွန်တော်တစ်ပတ်လောက်ရပ်တန့်နိုင်ပေမယ်တူသောငါတို့သည်စားကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း 500 တွေကိုနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်နှင့်ကျွန်တော်ကိုထေမိရန် tools များလိုအပ်မယ့်အစားအစာကိုစွဲပြောကြပါတယ်။
၄။ ရည်ရွယ်ချက်၊ အသိအမြင်နှင့်သတိရှိမှု၊ clenching နှင့်ရပ်တန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဟာကသင့်အတွက်ဟုတ်သလား။ ဒါပေမယ့်ငါတို့သတိထားမိလာတဲ့အရာတွေကိုသာလွတ်မြောက်သွားအောင်လုပ်နိုင်မလား။ ကျွန်ုပ်၏ fetish ၌ကျွန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ။ ၎င်းသည် ၃၅ နှစ်ကြာလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း လွင်ပြင်မှာပုန်းနေတယ်။
လူသိများတဲ့လူသိများတာကတော့ ... ငါတို့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်၊ အမည်မသိမသိသောအခါဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်သွားမလဲ သို့မဟုတ်မသိသောလူသိများ? ရဟန်းတို့ဤသည်ကိုသတိရမှု၏အလှူတည်း။ သင်တန်းကိုယူပါသို့မဟုတ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ပါနှင့်ကျင့်သုံးပါ။ မြတ်စွာဘုရားသည်ကောင်းသောအရာများ၌ပင် တွဲဖက်၍ ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၊ သင်၏အတွေးများ၊ ယုံကြည်မှုများ၊ တပ်မက်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု၊ အထီးကျန်မှု၊ ကလေးဘဝ၊ ခံစားချက်များကိုသတိပြုပါ။ သင်ကမီနူးတစ်ခုတွင်အစားအစာကိုရွေးချယ်နေသည့်အလားလက်ခံပါ။ သင့်ရဲ့အသိအမြင်ကနေခက်ခဲခံစားချက်တွေကိုနှင့်အတူထိုင်ပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျန်းမာသန်စွမ်းသောလုပ်ရပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ
မင်းရဲ့ fetish ကမင်းကိုဘာပေးနေတာလဲ၊ ယင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကားအဘယ်နည်း။ သင်ငြီးငွေ့နေသောအခါသို့မဟုတ်မကောင်းသောစိတ်နေသည့်အခါ - မှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုကိုယူပြီးသင့်စိတ်ထဲဘယ်ကိုသွားသည်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ သို့မဟုတ်ညင်ညင်သာသာတွေးတောဆင်ခြင်ပါ၊ ဆုတောင်းပါ။ ဒါကမနှစ်မြို့ဖွယ်ဖြစ်ပေမယ့်သင်ခံစားရရမယ့်အရာက (ပြီးတော့ငါနာကျင်လိမ့်မယ်သေချာတယ်။ ဒါပေမဲ့မင်းကနာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရပြီ”) ဟုတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနာကျင်မှုဆီကိုသွားပြီးလက်ခံခြင်းဟာရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကာကွယ်ဖို့နဲ့အသုံးပြုဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ သေချာတာပေါ့၊ မင်းကနာကျင်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ကိုဒုက္ခပေးတယ်၊ ဒါကပိုဆိုးစေတယ်။
မေးပါ။ ဒါကလုံခြုံရေးသဘောလား။ လုံခြုံမှုလား။ နောက်ဆုံးတော့ပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ခြင်း? လုံးလုံးလား နားလည်သဘောပေါက်? ရင်းနှီးမှုလား။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ကပ် နားလည်သဘောပေါက်? ၎င်းသည်အဆုံးစွန်ဆက်သွယ်မှုလား? မင်းအပြစ်ပေးခံနေရတယ်၊ ပျက်ပြယ်လားတစ်ခုခုပျောက်နေလား။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး သို့မဟုတ်inityတ္တရာ ၀ တ္ထုတစ်ခုကိုဖြည့်ရန်တောင်းဆိုခြင်းသည်အဆုံးမဲ့သေးငယ်သည့်အပေါက်လေးတစ်ခုအတွင်းရှိအဆီစတုရန်းတံစို့ကိုကပ်ထားခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလုပ်မလုပ်နိူင်ပါ၊ ဒေါက်ထဲတွင် ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်ထိုအချက်ကိုမပြောင်းလဲပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာရှိအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်သင့်ကိုမပြီးစေလျှင် (သူမစွမ်းနိုင်။ ဘယ်တော့မျှမတတ်နိုင်လျှင်) သို့ဖြစ်လျှင်ဒေါက်ဖိနပ်စီးခြင်းကသင့်ကိုမည်သို့ကယ်တင်နိုင်မည်နည်း။ မင်းကမင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ဆည်းတယ်။ ထိုအခါသူမကယခုသင့်ဘဝကိုအရေးကြီးသောချီးမွမ်းဖြစ်လာသည်။ ထို့နောက်သူမအဝတ်အစားသည်ထမင်းပေါ်ထမင်းဟင်းတစ်ခွက်မဟုတ်တော့ဘဲဟင်းရည်ဖြစ်လာသည်။ ဒီဟာကိုထပ်ခါထပ်ခါလေ့လာပါ။ တစ် ဦး fetish နှင့်လွတ်လပ်ခွင့် (အတွင်းပိုင်း) နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်ကြ၏။ အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်ပြင်ဆင်မှုတစ်ခုလိုချင်ပါကသင်၏နာကျင်မှုကိုရင်ဆိုင်ပြီး၎င်းကိုလက်ခံပါ။ တိုးတက်မှုပင်ဖြစ်သည်၊ ထိုနေရာမှအသစ်စတင်သည်။
သင်၏ fetish ၏အကျိုးကျေးဇူးများအားလုံးသည်စျေးပေါသောအစားထိုးများဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်ဝန်ခံသည်မှာ၊ တကယ့်အဖြစ်မှန်နှင့်ခဏသာတည်မြဲသည်ဟုခံစားရသည်) ... သို့သော်၎င်းသည်ထပ်ဆင့်ပေါင်းစပ်မှု၏ဒိုင်းနမစ်မဟုတ်လော ယာယီပြင်ဆင်မှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးနောက်တဖန်ပြန်လည်ချို့တဲ့လာသည်။ တစ် ဦး ကအစစ်အမှန်ပြင်ဆင်ချက်မလိုအပ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကသွားလိမ့်မယ် .... ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအလုပ်မလုပ်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းကသင့်လိုအပ်ချက်တွေရဲ့ဆူညံသံကိုဖုံးအုပ်လိုက်ပြီးနောက်အာရုံထွေပြားသွားစေတယ်။ တဖန်တုံ။
သင်ပိုမိုသိရှိလာပါလိမ့်မည်။ ပို၍ မသိသောသူများသည်လူသိများသူများအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာလိမ့်မည်။ ထို့နောက်သင်သည်ကြီးထွားလာသော၊ ပို၍ ပညာရှိသောအတွင်းပိုင်းအလင်းနှင့်လမ်းညွှန်မှုကို အခြေခံ၍ လက်ခံရန်သို့မဟုတ်အရှုံးပေးရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
၅) သူမဘာခံစားရမလဲဆိုတာသူမတွေးနေမိသလား? သူမဘယ်တော့မှတိုင်းတာရန်ဘယ်သောအခါမျှမမှီခိုအပေါ်မှီခိုနေသည်ဟုခံစားရသည် အဲဒါကိုပြောင်းပါ။ သူမမှာချိန်းတွေ့သည့်ညတစ်ညနှင့်သူမလိုချင်သည့်အချိန်တိုင်းတွင်သူမသည်ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကဲ့သို့အနိုင်အထက်ပြုခြင်း၊ အနီရောင်ပန်းပွင့်နှင့်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ပေးရန်သူမအခိုင်အမာဆိုထားသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်။ အလွန်တိကျတဲ့ - တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်။ ဒါမှမဟုတ်သူမအကြောင်းကိုမဆိုင်းမတွပြောဆိုခဲ့သည်။ သူမသည်ဤအရာအလုံးစုံကိုလိုချင်သည်ဆိုပါစို့၊ သူသည်ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေးတစ် ဦး အနေဖြင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့သော်လည်းရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကဲ့သို့သူ Bond ၏အယူအဆနှင့်ကပ်လျက်တည်ရှိသည်။ ပန်းများနှင့် woos အမျိုးသမီးတွေ။
မင်းရဲ့အခြေအနေကိုသင်လိုက်နာမယ်ဆိုရင်သူမကသင့်ကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီအခန်းကဏ္fillကိုသင်ဖြည့်စွက်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင်အနားယူပြီးသင်ကိုယ်တိုင်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီကို ၀ တ်ဆင်ပြီး၊ ဒေါ်လာ ၁၀ ဒေါ်လာရှိမယ်ဆိုရင်…စုစုပေါင်းအလှည့်ကျသွားသည်။ အဲဒါကဘယ်လိုခံစားရလဲ။
ညစ်ညမ်းမှုကိုရပ်တန့်ပြီးလမ်းပေါ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးပါ။ အဘယ်ကြောင့်ပိုပြီးတပ်မက်။ မင်းကအရက်သမားတစ်ယောက်ဆိုရင်ဗိုက်ဗက်စာလုံးတွေကိုမော့ကြည့်ပြီးငေးကြည့်နေမလား။ ဒါမှမဟုတ်အရက်ဆိုင်ပြတင်းပေါက်ကနေတဆင့်လား။ အဘယ်ကြောင့်နှောင့်ယှက်ရသနည်း ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုစိုစွတ်နေသောလိင်ဆက်ဆံမှုသို့အဘယ်ကြောင့်အပိုလှုံ့ဆော်မှုများပေါင်းထည့်သနည်း။ အစားစခန်းချသွားပါ။ သေးငယ်သောအရာများကိုခံစားပါ - ကြီးမားသောအပြီးသတ်ပစ္စည်းများကိုမပျော်ပါနှင့်။ ဒါက bullshit ပါ။
၆။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားခွင့်ပြုပါ။ သင်သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ငြင်းပယ်သည်မဟုတ်။ အရှက်ခွဲခြင်းအားဖြင့်သင်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောပျင်းစရာကောင်းသည့် vanilla ဘဝသို့ကျရောက်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ သငျသညျ - ချိုင်းထောက်အဖြစ်သင်၏ fetish လိုအပျသောသေးငယ်တဲ့အရေးပေါ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ထံမှအကြံပေးချက်ကိုယူမှသာလျှင်သင်ယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်။ ထိုငတ်မွတ်သောသူငယ်သည်မိမိ၌ပြည့်စုံ။ ပေးသောသူဖြစ်၏။
တကယ်တော့ကြိုးစားပါ။ Vanilla အခုငါ့အတွက်အရမ်းပျော်တယ်။ ကျွန်တော့်ဇနီးကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖန်တီးပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဆက်သွယ်ရေး ၀ တ်မှုနှင့်အ ၀ တ်အစားမပါဘဲကြီးမြတ်ခြင်းကိုခံစားမိသည်။ Vanilla fuck ဆိုတဲ့ဟာပျော်ဖို့ကောင်းတယ် သူမဝတ်ရင်ငါကြိုက်မလား သေချာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမလိုအပ်ပါဘူး ပြီးတော့ငါအရမ်းနာကြည်းပြီးစိတ်ဓာတ်ကျနေပေမဲ့သူမလိုချင်တာကိုလက်ခံတယ်။ ယခုသူသည်ကျွန်ုပ်ကိုမိဘကဲ့သို့သောဆက်ဆံရေးတွင်ပြည့်စုံရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ငါတကယ့်လူတစ်ယောက်လိုခံစားရတယ်။ သင်လိုအပ်နေသည့်အခါတိုင်းအတွင်းစိတ်တိုးချဲ့မှုတစ်ခုကိုသင်ခံစားရပါကမိမိကိုယ်ကိုအရှုံးပေးသည်ကိုကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်နည်းလမ်းများကရယူခြင်းသည်ကောင်းကြောင်း၊ အရာဝတ္ထုများကိုရယူခြင်းသည်သင်အနည်းငယ်အရွယ်ရောက်သည်နှင့်အမျှအမှန်ပင်“ ကောင်းသည်” ဖြစ်သည်ဟုသင်ထင်မြင်နိုင်သည်မှာ“ အရှုံးပေးခြင်း” သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာတွင်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စားသုံးသူယဉ်ကျေးမှုကအော်ဟစ်နေသည်မဟုတ်ပါ။ “ ပြုလုပ်ရန်” နှင့်နောက်ဆုံးတွင်“ ထိုတွင်” ရရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမေရိကန်၏ကြီးမားသောအိပ်မက်မှာကြီးမားသောအမေရိကန်ဒဏ္myာရီတစ်ခုဖြစ်သည်။ သေးငယ်တဲ့အရာတွေထဲမှာ“ ဒီမှာ” ရှိတယ်။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသမီးများအားလုံးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသမီးတိုက်ပွဲများမှကျွေးမွေးနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ပျော်ရွှင်ပါ၊ ယောက်ျားများအတွက်ကောင်းတဲ့အရာများလုပ်ပေးပါ၊ ရိုးရှင်းအောင်ထားပါ။ သားကောင်ဇာတ်လမ်းနှင့်ရပိုင်ခွင့်များဖြင့်သွေးဆောင်ခြင်းကိုမခံပါနှင့်။ ၎င်းသည်စွဲလမ်းမှုနှင့်တူသည်။
၇) ကိုယ်ကျင့်တရားပြNotနာမဟုတ်ပါ။ အထက်ပါအရာများမှကိုယ်ကျင့်တရားပြissueနာမရှိပါ။ အဘယ်သူမျှမလက်ချောင်းလှုပ်ရှိပါတယ်။ ဤသည်ကိုချစ်ရန်နှင့်လုံခြုံရန်လူ့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမှန်တရားနှင့်ထင်ယောင်ထင်မှားအကြောင်းပါ။ သို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်နှင့်သင်္ကေတ။ သို့မဟုတ်ပါကဖြစ်သင့်သောအရာကို၏စိတ်ကူးနှိုင်းယှဉ်ရှိနေခြင်း။ သင့်ဇနီး၊ အမေ၊ ကလေးများ၊ သို့မဟုတ်ပါ့ခ်ျကိုမဟုတ်ပါ။ pantyhose သို့မဟုတ်ရာဘာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် blowjob တစ်ခု။ သင်၏စိတ်ဓာတ်သာအဓိကလွတ်လပ်မှုဖြစ်သည်။ ထိုအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်သူတို့ပေါ်ပေါက်လျှင်အပိုဆုအဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်, သူတို့သည်မကျင့်လျှင်လည်းကောင်းပါတယ်။ သငျသညျပြီးသားပြည့်ဝသကဲ့သို့ သငျသညျအမှုအရာချင်တယ်ခွင့်ပြုခဲ့ ... ဒါပေမယ့်ဒီပြီးစီး၏တောငျ့နှင့်သူမသငျသညျပျော်ရွှင်စေရန်ဤအရာတို့ကိုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
လက်ဝဲ (လစ်ဘရယ်) နှင့်မှန်ကန်သော (ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ) နှစ် ဦး စလုံးမရခဲ့သည့်အရာသည်အမှားအမှန်မဟုတ်ပါ။ ဘုရားသခင်နဲ့အမှန်တရားဆိုတာဘယ်ညာ၊ ဘယ်ညာမှမဟုတ်ပါဘူး။ “ မင်းလိုချင်တာကိုလုပ်ပါ” ယဉ်ကျေးမှုများလွှမ်းမိုးနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်မှုရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်စွဲရှင်သန်။
ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်“ ဒါကအပြစ်ရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲ။ ဒါကြောင့်မလုပ်သင့်ဘူးလား၊ မကောင်းဘူးလား” - တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုစသည်တို့ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော ၀ ိညာဉ်ရေးရာတတိယနည်းလမ်းမှာ“ မင်းကမင်းကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်နိုင်သော်လည်း…ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီး၊ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကမှန်တယ်ဆိုတာသိလာတယ်၊ ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့တပ်မက်မှုတွေကိုမဟုတ်ဘဲအဲဒါတွေကိုငါတို့ယူလာကြတယ်။ ကျေနပ်အားရမှုမရှိသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့လုံလောက်စွာမရရှိနိုင်ပါ။ ဘုရားသခ။ ဒါကြောင့်ငါက“ မ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမကြိုက်တာကတားမြစ်ထားတဲ့ဒရာမာတွေကိုထပ်ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပိုဆိုးလာတယ်၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာပြissueနာကိုစိတ်မှမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
Don't ဟူသောစကားလုံးသည်သင့်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်မိုက်မဲသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာလူသားဖြစ်ခြင်း၏အဖြစ်မှန်လျစ်လျူရှု။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့သွေးဆောင်ခံရလိမ့်မယ် ... ပြီးတော့လှည့်စားခံရတော့မယ်၊ ငါတို့တွေတွယ်တာသွားကြတယ် ... ပြီးတော့ငါတို့မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ၊ အားလုံးကိုလက်ခံပါ။ အထက်ပါကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ၀ ိညာဉ်အားပေးမည်။ ထို့နောက်ထိုနေရာမှအရေးယူပါ။ “ ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အခါ” ဟူသောစကားလုံးကိုမပြောင်းပါနှင့်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်။ ထိုနည်းအားဖြင့်သင်သည်လူသားဖြစ်ခြင်း၏ ၀ ိညာဉ်နှင့်ဆိုင်သောအမှန်တရားကိုဂုဏ်တင်ပါသည်။ သံပုရာရည်ကိုပြုလုပ်သည့်အခါသင်သည်ခါးသောသံပုရာ (လူ့အတွေး) ကိုမဖယ်ရှားပါ၊ သကြားနှင့်ရေ (ပါ ၀ င်မှု) ထပ်ပေါင်းထည့်ရုံသာမကအရသာနှင့်မျှတ။ အရသာရှိသောအရသာကိုရရှိသည်။
ငါမူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်စိတ်ခံစားမှုများနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ရှိခဲ့ဖူးဘယ်တော့မှမဖရိုဖရဲခံစားချက်တွေကိုနဲ့တူဆုတ်ခွာတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရတယ်, ငါ့အဘို့ကလကြာမြင့်ပေမယ့်ကိုယ့်တော်တော်လေးခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ငါ့အတွက်ဒီအရင်းအမြစ်ကအပေါ်ယံမဟုတ်ဘဲနက်နဲတယ်။ အချို့သောအချိန်များတွင်ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲရုန်းကန်နေရသော်လည်း၊ တကယ့်ဘ ၀ တွင်များစွာကောင်းသည်။ အခြေခံအားဖြင့်သွားပြီ ယင်း၏သရုပ်ဆောင်ထွက်ရပ်တန့်ကတည်းကနှစ်ပေါင်းများစွာပေမယ့်နောက်တဖန်စိတ်ကူးယဉ်အသကျရှငျဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဥပမာအားဖြင့် ၁၂ နာရီ၊ လေးလံသောအလုပ်ခွင်တွင်ကျွန်ုပ်သည် ၅ စက္ကန့်ထက်မကစဉ်းစားနိုင်သကဲ့သို့စဉ်းစားမိသည်။ ဒါကြောင့်ငါ့နေ့၏ .12% ဖြစ်သနည်း လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်ကကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်စဉ်မိနစ် ၃၀ ကြာအောင်အိပ်ခဲ့ရပြီးတီဗွီကြည့်။ တွေးတောဆင်ခြင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သတိထားမိရင်သတိထားမိရင်အလွယ်တကူ ၀ င်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်ဇနီးကလုံးဝစိတ်မ ၀ င်စားတဲ့အတွက်လိင်ဆက်ဆံတာကိုသွားလုပ်တယ်။
မှီခိုမှုအ vs 10) Desire
ဘယ်သူမှသင့်ထက်ကြောင်းပိုင်းခြားသိမြင်သည်အခြားစေနိုင်သည်။ သငျသညျအထဲကဘယ်တော့မှ ... ဘယ်သူ့ကိုမှထိတွေ့ဘယ်တော့မှရင်တောင်ငါစိတ်ထဲမှာထဲမှာတစ်ခုခု, တစ်ခုခု (fetish သို့မဟုတ်ရောဂါပိုးများသို့မဟုတ်အမျက်ဒေါသ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်) အပေါ်စွဲနေလျှင်, သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်၏အသက်တာကိုကန့်သတ်နေကြသည်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား။ ဒါ့ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာမင်းရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကန့်သတ်ခြင်း - လူတွေကိုလက်ရှိနှင့်အမှန်တကယ်ရှိနေဖို့လိုအပ်တဲ့ကမ္ဘာကြီးတစ်ခု။ ဒါကြောင့်ညင်ညင်သာသာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ၊ တွေးတောဆင်ခြင်ပါ၊ မှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုယူပါ။
သင့်ရဲ့တိုက်တွန်းနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်အလိုဆန္ဒ ... သို့မဟုတ်မှီခို -is? ကျွန်ုပ်တို့သည်အလိုဆန္ဒ၏သတ္တဝါများဖြစ်သော်လည်းအလိုဆန္ဒ၏အလင်းရောင်နှင့်မှီခိုမှု၏ပြင်းထန်မှုနှင့်ပြင်းထန်မှုတို့အတွက်ခြားနားမှုရှိသည်။ ဒါမှမဟုတ်အလိုဆန္ဒကအဲဒီလမ်းကိုစပြီးငါတို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်သလား။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကြားဖြတ်ရန်သင်လိုအပ်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ အဖြစ်မကြာမီကစတင်အဖြစ်လုပ်ပါ။ သငျသညျပြောင်းလဲမှုအသိပေးစာနှင့်အသက်ရှူခံစားရသောအခါနှင့်လိုလိုလားလားဝေး refocus ။ သင့်စိတ်ထဲတွင်ချည်မျှင်ကိုလိုက်လျှောက်ရန်တိုက်တွန်းသော်လည်း။ သငျသညျရှိခဲ့နှင့်သင်က ဦး ဆောင်ဘယ်မှာသိကြ၏။
-အချိုးအစားထဲကနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်းအတွေးများနှင့်ခံစားချက်များကိုတစ်ဦးပြင်းထန်မှုနှင့်ကြိမ်နှုန်းရှိပါသလား ခြေလျင်သို့မဟုတ်ခြေအိတ်တစ်စုံသို့မဟုတ်သမျှရန်။ ယောက်ျားအများစုက“ ငရဲ၊ ငါခြေကိုကြိုက်တယ်” လို့ပြောကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကသူတို့ကိုစိတ်စွဲလမ်းနေမယ်ဆိုရင်အဲဒါကမင်းအတွက်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး သူငယ်ချင်းများက“ ဝူးဟူး“ ငါပါတီပွဲလုပ်တာကိုနှစ်သက်တယ်” ဟုအော်ဟစ်နေသည့်သူငယ်ချင်းများကြားသည့်အခါနှစ်သိမ့်မှုရှာသောအရက်နှင့်တူသည်။ Norma ပင်အထောက်အကူမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဟာအလုပ်လုပ်ပါသလား ဒါမှမဟုတ်အလုပ်မဖြစ်ဘူးလား။ သူတို့အားမေးခွန်းများကိုဖြစ်ကြသည်။
-သင်ကယာဉ်မောင်းလား။ ဒါမှမဟုတ်သင်“ မောင်းနှင်သူ” ဖြစ်လာတယ်။ သင်၏တစ်နေ့တာ၏အနည်းဆုံးရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးများနှင့်သင်၏အချိန်မည်မျှရှိသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်တုန်းကငါတိုင်းတာပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ အခုတော့အရမ်းသေးလွန်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအစာကျွေးမယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးထွားနိုင်တယ်
11) က Space ကို Give
လေ့ကျင့်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်ကြီးထွားနိုင်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်နိုးကြားတက်ခြင်း၊ အရှက်ကွဲခြင်း၊ ထသောအခါအလျှင်းမပြုနှင့်။ ၎င်းသည်“ မကောင်း” ဟုပင်မဆုံးဖြတ်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်အခြားအတွေးတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ကြည့်လိုက်စမ်း။ မသက်မသာနှင့်တိုက်တွန်းခံစားရသည်။ သငျသညျမုန်တိုင်း Pass ကိုစောင့်ကြည့်မယ်လို့သကဲ့သို့ခံစားရပါ။ အဆင်မပြေအကြောင်းကိုစပ်စုရယူပါ။ ဒါကိုအဆ ၅၀၀၀ လုပ်ပြီးဖြစ်ပျက်လာတာကချဲ့ထွင်မှုတစ်ခု၊ အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုပါ။ အဲဒါဟာအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသွားတယ်၊ ပြီးတော့သင့်ဘ ၀ ရဲ့တခြားနေရာအားလုံးမှာစွမ်းအင်တွေထည့်သွင်းလာတယ်။ တစ် ဦး တက်ကြွတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ထိုသို့လျှော့ချခြင်း / အားနည်းခြင်းသည်သင်အား၎င်းကိုသွားရန်ပြောရန်သို့မဟုတ်ထုတ်ရန်အမိန့်ထုတ်ထားသောကြောင့်သို့မဟုတ်ထိုလုပ်ရန်အတွက်ကြံစည်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲသင်ကထိုအရာကိုမှန်ကန်စွာစိုက်ကြည့်ပြီးလက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောရှုထောင့်အားလုံး) … တုံ့ပြန် - ဒါပေမယ့်သင်ကကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုလုပ်နေတာကြောင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ်သင်တုန့်ပြန်လျှင်သင်လည်းထိုအရာကိုကြည့်ပြီး“ wow အဲဒီမှာငါတုံ့ပြန်နေတယ်” ဟုပြောသည်။ သို့သော်ကြည့်သည်။ ဒါကိုအကြိမ် ၅၀၀၀ လုပ်ပြီးအဲဒါကိုစွန့်လွှတ်လိုက်တာကိုလုပ်ပါ၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်အပေါ်၌ oxegen မျက်နှာဖုံးကိုတင်ထားသလိုမျိုးသင်ကျယ်ဝန်းလိမ့်မည်။
ဘာမှမလုပ်ဘူး ဘာမှမပေးပါနဲ့၊ ဒါဆိုတည်ဆောက်စရာဘာမှမရှိဘူး။ သငျသညျလေထုလာကြတယ်သို့မဟုတ်အမဲဆီမြို့ရိုးကိုတက်ဖို့ကြိုးစားနေလိုပဲ။ သငျသညျ fetish ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်အစားသင်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုပြောင်းလဲပစ်ကြသည်မဟုတ် ... ထို့နောက်အရာသူကပြောတယ်သူကိုပြောင်းလဲ။
fantazise သို့မဟုတ်နိုးထနှင့်ပိုပြီးအရှုံးမပေးဖို့နည်းလမ်းတွေအဖြစ်စိတ်ကူးယဉ်သို့မဟုတ် porn အတွက်လုပ်ကြဖို့နေ့စဉ်အစပျိုးခြင်းကိုသုံးပါ။ uသူတို့ကိုလောင်စာအဖြစ်မှတ်ယူပါ။ ယခုလိုလိုလားလားလက်လျှော့အရှုံးပေးလိုက်ခြင်းဖြင့်နေထိုင်ခြင်းကိုသတိပြုမိခြင်း၏အံ့သြဖွယ်နွေးထွေးမှုကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်သည်။
12) ကိုယ်ကျင့်တရားပြissueနာမဟုတ်ပါဘူး။ အထက်ပါအရာများမှကိုယ်ကျင့်တရားပြissueနာမရှိပါ။ အဘယ်သူမျှမလက်ချောင်းလှုပ်ရှိပါတယ်။ ဤသည်ကိုချစ်ရန်နှင့်လုံခြုံရန်လူ့ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမှန်တရားနှင့်ထင်ယောင်ထင်မှားအကြောင်းပါ။ သို့မဟုတ်အဖြစ်မှန်နှင့်သင်္ကေတ။ သို့မဟုတ်ပါကဖြစ်သင့်သောအရာကို၏စိတ်ကူးနှိုင်းယှဉ်ရှိနေခြင်း။ သင့်ဇနီး၊ အမေ၊ ကလေးများ၊ သို့မဟုတ်ပါ့ခ်ျများမဟုတ်ပါ။ pantyhose သို့မဟုတ်ရာဘာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါမှမဟုတ် blowjob တစ်ခု။ သင့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်သာအဓိကလွတ်လပ်မှု။ ထိုအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်သူတို့ပေါ်ပေါက်လျှင်အပိုဆုအဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်, သူတို့သည်မကျင့်လျှင်လည်းကောင်းပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သူတို့လုပ်ရင်မင်းတို့ရဲ့စကတ်ကိုယူပြီးနစ်မြှုပ်မယ်ဆိုရင်မင်းသူတို့ကိုစွန့်လွှတ်ခွင့်ပြုပါ။ သင်သာပြည့်နေပြီ ဖြစ်၍ သင်သာရလိမ့်မည်။ သငျသညျအမှုအရာချင်တယ်ခွင့်ပြုခဲ့ ... ဒါပေမယ့်ဒီပြီးစီး၏တောငျ့နှင့်သူမသငျသညျပျော်ရွှင်စေရန်ဤအရာတို့ကိုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုမှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဒါဟာလက်ျာဘက်သို့မဟုတ်အမှားတစ်ခုခုအကြောင်းကိုလက်ဝဲ (လစ်ဘရယ်) နှင့်ညာဘက် (ကွန်ဆာဗေးတစ်) နှစ် ဦး စလုံးညာဘက်ရပုံရသည်မထင်ဘူး။ အတွင်းပိုင်းလွတ်လပ်မှုသည်ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်တွင်မဟုတ်ပါ။ လစ်ဘရယ်ဘက်မှကျွန်ုပ်တို့လွတ်မြောက်နိူင်ရန်အတွက်“ သင်လုပ်ချင်သမျှလုပ်ရန်” ယဉ်ကျေးမှုများလွှမ်းမိုးခြင်းအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ ဤတွင်စွဲလမ်းမှုသည်မှားယွင်းခြင်းနှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းတို့ဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်“ ဒါကအပြစ်ရှိတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲ။ ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းဘူးလား” - တရားစီရင်ခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်မှုများသည်စိတ်ပျက်အားလျော့မှုဖြင့်အဆုံးသတ်စေသည်။
လို့ပြောမယ့်စစ်မှန်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတတိယလမ်းရှိပါတယ်s ကို "သေချာသင်ကလုပ်ဖို့အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း ... ဒါပေမယ့်ဆငျးရဲဒုက်ခစေခြင်းငှါထိုသို့ core ကိုလွတ်လပ်မှုနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ... နှင့်ပွညျ့စုံမယ့်" ။ ဆင်းရဲဒုက္ခများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တရားကိုသိရှိလာကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တပ်မက်မှုများကိုမဟုတ်ဘဲထိုနေရာမှကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးများကိုယူဆောင်လာကြသည်။ ကျေနပ်အားရမှုမရှိသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့လုံလောက်စွာမရရှိနိုင်ပါ။ ဘုရားသခ။ ဒါကြောင့်ငါက“ မ” ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမကြိုက်တာကတားမြစ်ထားတဲ့ဒရာမာတွေကိုထပ်ဖြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပိုဆိုးလာတယ်၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာပြissueနာကိုစိတ်မှမဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
Don't ဟူသောစကားလုံးသည်သင့်၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်တူသည်။ ၎င်းသည်မိုက်မဲသောစကားလုံးဖြစ်သည်။ ဒါဟာလူသားဖြစ်ခြင်း၏အဖြစ်မှန်လျစ်လျူရှု။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့သွေးဆောင်ခံရလိမ့်မယ်၊ လှည့်စားခံရတော့မယ်၊ ငါတို့တွေတွယ်တာသွားကြတယ်၊ ငါတို့မှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေ၊ အားလုံးကိုလက်ခံပါ။ အထက်ပါကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ၀ ိညာဉ်အားပေးမည်။ ထို့နောက်ထိုနေရာမှအရေးယူပါ။ “ ဒီဖြစ်ပျက်တဲ့အခါ” ဟူသောစကားလုံးကိုမပြောင်းပါနှင့်။ အချိန်တိုင်း။ ထိုနည်းအားဖြင့်သင်သည်လူသားဖြစ်ခြင်း၏ ၀ ိညာဉ်နှင့်ဆိုင်သောအမှန်တရားကိုဂုဏ်တင်ပါသည်.
သံပုရာရည်ကိုပြုလုပ်သည့်အခါသင်သည်ခါးသောသံပုရာ (လူ့အတွေး) ကိုမဖယ်ရှားပါ၊ သကြားနှင့်ရေ (ပါ ၀ င်မှု) ထပ်ပေါင်းထည့်ရုံသာမကအရသာနှင့်မျှတ။ အရသာရှိသောအရသာကိုရရှိသည်။
တစ်ဦး Fetish အပိုင်းတစ်ဦး၏ Go ကိုစို့
တစ်ဦး Fetish အပိုင်းနှစ်ဦး၏ Go ကိုစို့
တစ်ဦး Fetish အပိုင်း THREE ၏ Go ကိုစို့